RFID အဝတ်လျှော်ခြင်းဆိုင်ရာ တံဆိပ်များ သည် အဝတ်လျှော်ခြင်းလုပ်ငန်းကို လွယ်ကူစွာ ပြီးမြောက်စေပါသည်။
TM Tag/ လက်ပတ်
13.56mhz ISO14443A အသုံးပြုခွင့် C...
စိတ်ကြိုက်ပလပ်စတစ် PVC NFC ...
မိုဘိုင်းကြိုးမဲ့ IOS Android...
မက်တာပေါ်ရှိ မိုက်ခရိုချစ်ပ်အသေးစား မီနီ...
RFID ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် အဝတ်အစားများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းတွင် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ UHF RFID နည်းပညာကို လျင်မြန်စွာ စုဆောင်းခြင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ အလိုအလျောက် သိုလှောင်မှုနှင့် စုဆောင်းခြင်းလုပ်ငန်းတွင် အလုပ်ထိရောက်မှုနှင့် အမှားအယွင်းနှုန်းများကို လျှော့ချပေးသည့် ထိရောက်သောစီမံခန့်ခွဲမှုကို နားလည်ရန် အသုံးပြုပါသည်။ RFID အဝတ်လျှော်တဂ်များ တပ်ဆင်ခြင်း၊ RFID ကောင်တာများ၊ လက်ကိုင်၊ ပုံသေစာဖတ်သူများနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုစီကို အလိုအလျောက် သိရှိနိုင်စေမည့် အခြားအသိဉာဏ်ရှိသော စီမံခန့်ခွဲမှုမုဒ်များ အသုံးပြုခြင်းဖြင့် RFID ပိတ်ချောစီမံခန့်ခွဲမှုကို စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။ ရေစိုခံ RFID UHF အထည်အလိပ်အထည်အလိပ်အဝတ်လျှော် Tag မှတဆင့်၊ တစ်စုတစ်စည်းတည်း ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်းတို့ကို တိကျစွာပြီးမြောက်စေကာ ပေါင်းစည်းထားသောစီမံခန့်ခွဲမှုထိရောက်မှုကို များစွာတိုးတက်စေသည်။
1. ကြိုတင်မှတ်တမ်းတင်ထားသော အညွှန်းအချက်အလက်
အဝတ်အစားများကို အသုံးပြုရန် ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ အဝတ်အစား အချက်အလက်များကို စာရင်းသွင်းရန် ကြိုတင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အောက်ပါအချက်အလက်များကို စာရင်းသွင်းပါ- အဝတ်အစားနံပါတ်၊ အဝတ်အစားအမည်၊ အဝတ်အစားအမျိုးအစား၊ အဝတ်အစားဌာန၊ အဝတ်အစားပိုင်ရှင်၊ မှတ်ချက်များ စသဖြင့်။
ကြိုတင်မှတ်တမ်းတင်ပြီးနောက်၊ အချက်အလက်အားလုံးကို ဒေတာဘေ့စ်တွင် သိမ်းဆည်းမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် စာဖတ်သူသည် ဆင့်ပွားစစ်ဆေးခြင်းနှင့် အမျိုးအစားခွဲခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် အဝတ်ပေါ်ရှိ တံဆိပ်များကို မှတ်တမ်းတင်ပါမည်။
ကြိုတင်စာရင်းသွင်းထားသော အဝတ်အစားများကို အသုံးပြုရန်အတွက် ဌာနအားလုံးသို့ ဖြန့်ဝေနိုင်သည်။
2. အညစ်အကြေး အမျိုးအစားခွဲခြင်းနှင့် သိုလှောင်ခြင်း။
အဝတ်များကို အဝတ်လျှော်ခန်းသို့ ခေါ်သွားသောအခါ၊ အဝတ်ပေါ်ရှိ အညွှန်းနံပါတ်ကို ပုံသေ သို့မဟုတ် လက်ကိုင်စာဖတ်သူမှ ဖတ်နိုင်သည်၊ ထို့နောက် သက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ဒေတာဘေ့စ်တွင် မေးမြန်းနိုင်ပြီး အဝတ်များကို အမျိုးအစားခွဲစစ်ဆေးရန် စခရင်ပေါ်တွင် ပြသထားသည်။
ဤနေရာတွင် အဝတ်အစားများ ကြိုတင်မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးနိုင်သည်၊ မှားယွင်းသော အနေအထားတွင် ထားရှိခြင်း ရှိ၊ ဂိုဒေါင်ဘောက်ချာကို print ထုတ်ပါ။
3. သန့်စင်ထားသောအဝတ်များကို စီခွဲခြင်းနှင့် ဖယ်ရှားခြင်း။
သန့်စင်ထားသောအဝတ်များအတွက်၊ အဝတ်အစားပေါ်ရှိ အညွှန်းနံပါတ်ကို ပုံသေ သို့မဟုတ် လက်ကိုင်စာဖတ်သူမှ ဖတ်နိုင်သည်၊ ထို့နောက် သက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ဒေတာဘေ့စ်တွင် မေးမြန်းနိုင်ပြီး အဝတ်များကို အမျိုးအစားခွဲစစ်ဆေးရန် စခရင်ပေါ်တွင် ပြသနိုင်သည်။ စနစ်၏ ပြင်ပလည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှု ပြီးမြောက်ပြီးနောက်၊ ထွက်ခွာချိန်၊ ဒေတာ၊ အော်ပရေတာနှင့် အခြားအချက်အလက်များကို အလိုအလျောက် မှတ်တမ်းတင်မည်ဖြစ်ပြီး ပြင်ပဘောက်ချာကို အလိုအလျောက် ရိုက်နှိပ်မည်ဖြစ်သည်။
အမျိုးအစားခွဲထားသော အဝတ်အစားများကို အသုံးပြုရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ဖြန့်ဝေနိုင်ပါသည်။
4. သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်အတိုင်း စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအစီရင်ခံစာကို ဖန်တီးပါ။
ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်အရ၊ ဒေတာဘေ့စ်တွင် သိမ်းဆည်းထားသည့် ဒေတာကို အဝတ်လျှော်ခန်း၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်ကို မြှင့်တင်ရန် အကျိုးပြုသည့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အစီရင်ခံစာ အမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။
အညွှန်းများကို စကင်န်ဖတ်ခြင်း သို့မဟုတ် နံပါတ်များထည့်ခြင်းဖြင့် အဝတ်လျှော်ခြင်းမှတ်တမ်းများကဲ့သို့သော အချက်အလက်များကို လျင်မြန်စွာ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
အထက်ပါဖော်ပြချက်သည် သမားရိုးကျ အဝတ်လျှော်အပလီကေးရှင်းအများစုဖြစ်ပြီး အဓိကအားသာချက်များမှာ-
a အစုလိုက်စကင်န်ဖတ်ခြင်းနှင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၊ တစ်ခုတည်းစကင်ဖတ်ခြင်းမရှိဘဲ၊ လူကိုယ်တိုင်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အဆင်ပြေစေခြင်း၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူမြန်ဆန်ခြင်း၊
ခ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်များကို မြှင့်တင်ရန်၊ ဝန်ထမ်းကုန်ကျစရိတ်များကို သက်သာစေပြီး ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချပါ။
ဂ။ အဝတ်လျှော်ခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ အမျိုးမျိုးသော အစီရင်ခံစာများကို ထုတ်ပေးခြင်း၊ မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်းနှင့် လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို အချိန်မရွေး ထုတ်ယူပြီး သမိုင်းကြောင်းအတိုင်း ခြေရာခံပါ။
ခလုတ်ပုံသဏ္ဍာန် (သို့မဟုတ် အညွှန်းပုံသဏ္ဍာန်) အီလက်ထရွန်နစ်တက်ဂ်တစ်ခုကို ပိတ်စတစ်ခုစီတွင် ချုပ်ထားသည်။ အီလက်ထရွန်းနစ်တက်ဂ်တွင် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ထူးခြားသော သက်သေခံကုဒ်တစ်ခုပါရှိသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ပိတ်စတစ်ခုစီသည် ပိတ်စကို ဖျက်သိမ်းပြီးသည်အထိ ထူးခြားသောစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အထောက်အထားတစ်ခုရှိလိမ့်မည် (အညွှန်းကို ပြန်သုံးနိုင်သော်လည်း အညွှန်းကိုယ်တိုင်၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းထက် မကျော်လွန်ပါ)။ ပိတ်ချောအသုံးပြုမှုနှင့် အဝတ်လျှော်ခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတစ်ခုလုံးတွင်၊ ပိတ်စ၏အသုံးပြုမှုအခြေအနေနှင့် ဆေးကြောချိန်များကို RFID စာဖတ်သူမှတစ်ဆင့် အလိုအလျောက်မှတ်တမ်းတင်ပါသည်။ လက်ဆင့်ကမ်းလျှော်စဉ်အတွင်း အညွှန်းများဖတ်ခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးသည်၊ လက်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ရိုးရှင်းပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန်နှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုများကို လျှော့ချပေးသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ လက်ဆေးသည့်အရေအတွက်ကို ခြေရာခံခြင်းဖြင့်၊ ၎င်းသည် သုံးစွဲသူများအတွက် လက်ရှိပိတ်ချော၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ခန့်မှန်းနိုင်ပြီး ဝယ်ယူမှုအစီအစဉ်အတွက် ခန့်မှန်းချက်ဒေတာကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
လိုက်လျောညီထွေရှိသော UHF RFID UHF ထည် အထည်အလိပ် အဝတ်လျှော် Tag
အလိုအလျောက် claving ၏ကြာရှည်ခံမှု၊ သေးငယ်သောအရွယ်အစား၊ ခိုင်ခံ့မှု၊ ဓာတုခံနိုင်ရည်၊ ဆေးကြောနိုင်သောနှင့်ခြောက်သွေ့သောသန့်ရှင်းရေးနှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်သန့်ရှင်းရေး၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်။ ၎င်းကို အဝတ်ပေါ်တွင် အပ်ချုပ်ခြင်းသည် အလိုအလျောက် ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အချက်အလက်များ စုဆောင်းခြင်းအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ အ၀တ်လျှော်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ တစ်ပြေးညီ ငှားရမ်းမှုစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အဝတ်အစား သိုလှောင်မှုနှင့် ထွက်ပေါက်စီမံခန့်ခွဲမှု စသည်တို့တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြပြီး လုပ်သားစရိတ်များကို လျှော့ချကာ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ပေးသည်။ ဆေးရုံများ၊ စက်ရုံများ၊ စသည်တို့တွင် လိုအပ်သော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကြမ်းတမ်းစွာ အသုံးပြုရန် သင့်လျော်ပါသည်။